Iqela le-PIVX Ngaba i-Zerocoin kunye ne-Audio yongezelelwe! | PIVX
Iqela le-PIVX Ngaba i-Zerocoin kunye ne-Audio yongezelelwe!
Iindaba ezimnandi! Iqela le-PIVX liye lafaka uncedo lomninimzi onolwazi. Usenokuba ubonile [email protected] malunga neDivamenti, kodwa ngoku wenza izinto ezimangalisayo nge-audio yethu. [email protected] we-EMTEX Studio, unokujonga umsebenzi wabo apha https://emtex-studio.com/. Ngoko sinenhlanhla ukuba sibe naye njengomnye uPivian onomdla ofuna ukukunceda. Uhlobo lwakhe lokuqala lokulalelwayo lukho kwividiyo yanamhlanje: Yintoni i-Zerocoin? Yiyiphi into ephakamileyo, INKCAZELO nje yenkcazo yeZerocoin ejoliswe kwinto entsha kakhulu yokulila. Oku kufanele kube yinto enhle ukwabelana nabangani bakho.
Ngeli xesha @Bouilla wenza into edibeneyo yokwenza ukuba isiqwenga sivakale sikhulu, kubhetele ngakumbi ukuza. Wenze iingcombolo kwimakrofoni enmtsha kwaye ndawuthabatha omnye umboniso. Kuya kufika ngeveki okanye ezimbini, ukwenzela ukuba kuya kuba yinto eyoyikisayo kakhulu kwimiboniso
Isikhumbuzo esisecaleni, kuba ndingumfama, andizange ndivumelanise isandi sikaBouilla ngqo kwividiyo yam. Lo kwakuyimpazamo yam, kungekhona ukucinga ngomsebenzi wakhe. Sisebenza kwinkqubo, ukuqinisekisa ukuba ndiyifumana ngokupheleleyo epheleleyo!
Kukho konke okwangoku ngoku bafana, ndiyabonga ngokufunda kwaye ndiya kukubona kwiklasi yePIVX elandelayo!